UTİKAD Saadka Qeybta Warbixinta-Falanqeynta La-Xaan-qaadi karo ayaa Lagu Soo daray 2019 | RayHaber | raillynews
[10 / 02 / 2020] Wasiirka Turhan Çorlu Ergene Kala-saaridda Waddada ayaa ka Qaybgalay Munaasibadda Furitaanka Waddada Tekirdağ	59 Tekirdag
[10 / 02 / 2020] Safiirada EU Waxay Soo Bandhigeen Anatolia Iyadoo Dalxiis Loogu Yeedhay Bariga Express	06 Ankara
[10 / 02 / 2020] Kordhi khidmadaha Marmaray Toll ..! Waa tan Taatiiqda Cusub	34 Istanbul
[10 / 02 / 2020] Qaab Kale oo Looga Badbaadiyo Gaadiidka Sababta Dhismaha Konya Metro	42 Konya
[10 / 02 / 2020] Adeegyada Tareenka Xawaaraha Sare ee Imaatinka Dadka Eskişehir	26 Eskisehir
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulUTİKAD Saadka Qeybta Warbixinta-Falanqeynta La-Xaan-qaadi karo Waxaa lagu soo daray sanadka 2019
22 / 01 / 2020 34 Istanbul, tareenka, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Warbixinta waaxda saadka ee loo yaqaan 'utikad logistics' ayaa sidoo kale lagu soo daray falanqeyn la yaab leh.
UTİKAD, Ururka Caalamiga ah ee Bixiyaasha Adeegga Gaadiidka iyo Saadka, ayaa daabacay warbixin tilmaami doonta qaybta. Warbixinta oo loo diyaariyey iftiinka aqoonta iyo waaya-aragnimada Waaxda Xiriirka waaxda UTİKAD, waxaa saxeexay maareeyaha xiriirka waaxda Alperen Güler.
Ka dhaqaaqista logistikada adduunka, UTİKAD Logistics Sector Report 2019, oo baaraysa horumarka warshadaha saadka ee Turkiga sanadihii la soo dhaafay iyadoo lagu saleynayo habab gaadiid oo leh xog tirakoob, waxaa ka mid ahaa qodobo muhiim ah oo saamaynaya warshadaha laga soo bilaabo Brexit una sii gudbiya hayadaha caalamiga.
Maamulaha Xiriirka UTİKAD Alperen Güler wuxuu soo bandhigayay warbixinta la wadaagey dadweynaha kulanka UTİKAD ee Shirka Saxaafadda Dhaqameed ee la qabtay Janaayo 9, 2020. Halkan ka dhaansado qaab dhismeedka aasaasiga ah ee qaybta saadka ee Turkey, daneeyayaasha qaybta, noqon il tixraac loogu talagalay qeybta in ay jaamacadaha iyo warbaahinta ururada, warbixinta ganacsiga shisheeye Turkiga diyaariyey ujeedooyin macluumaad waayo, saamiyada iyo horumarinta hababka gaadiidka ciyaaray headlines:
WAA MAXAY SAMEEYAAN MUHIIM?
Maxay tahay sababta geeddi-socodka Britain ee ka bixitaanka Midowga Yurub ee loo yaqaan Brexit ay muhiim noo tahay? Midawga yurub wuxuu badanaa u muuqdaa qaab dhismeedka siyaasadeed, laakiin dhab ahaan waxaa jira suuq caadi ah iyo midowga kastamyada. Go'aanka Ingiriiska ee midowga wuxuu ka dhigayaa Ingriiska waddankii sedexaad kahor Midowga Yurub. Tani waxay ka dhigan tahay in kumanaan shirkad ganacsi oo shisheeye iyo saadka ee horey uga faa iidaystay heshiisyada xubinnimada EU ay tahay inay dhawraan qawaaniinta cusub marka ay la shaqeynayaan Boqortooyada Midowday. Sidaas xaqiiqada ah in nidaamka caadooyinka UK, canshuuraha, wada-hawlgalayaasha ganacsiga labada EU oo ku saabsan arrimaha sida soo dejinta iyo dhoofinta caddayn iyo sidoo kale codsiyada cusub ee la-hawlgalayaasha ganacsiga ee Turkey lug doonaa. Xaaladdan oo kale aynu eegno England in mugga Turkey Turkey ee ganacsiga 15 milyan oo dollar iyo sidoo kale in mugga gaar ah oo $ 5 bilyan oo dheeraad ganacsiga su'aashan. mugga sheegay in dayactirka iyo hagaajinta Brexit ku dhow socodka geedi socodka ay qaybta ganacsiga shisheeye iyo logistics maxaliga ah ee Turkey waa muhim.
Hawsha, oo lagu qeexay dagaallada ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha, ayaa dhab ahaantii ka kooban canshuurta dheeriga ah ee ay labada dal ku dabaqeen alaabada laga soo dejiyo midba midka kale. Shiinaha ayaa labanlaab ah alaabada laga soo dejiyo Mareykanka
waa wadan dhoofiso in ka badan USA. Dagaalka ganacsi ee ku saleysan badeecada ee udhaxeysa labada dal ayaa sidookale awood u leh inuu saameyn ku yeesho adeega lasiiyay alaabada. Muddadii aan u yeeri lahayn dagaalkan ganacsi ee Noofembar-Disember ee sanadkii hore, xoogaa jilicsanaan ayaa la arkay. Tusaale ahaan, Shiinuhu wuxuu hoos u dhigay cashuurihii dheeraadka ahaa ee ay u keeneen alaabada dhoofinta badan. Si kastaba ha noqotee, sii wadista hanaankan iyada oo aan wax dabacsanaan ahi laga yaabo inay ku khasbto Shiinaha inay dib-u-qaabeeyaan qaabdhismeedka silsiladda sahayda gaar ahaan tikniyoolajiyada iyo shirkadaha dharka, kuwaas oo isu arka inay yihiin saldhig wax soo saar isla markaana dejinaya qaabeynta silsiladda sahayda adduunka oo dhan. Dabcan, marka laga hadlayo Shiinaha, waxaa lagama maarmaan ah in la xuso hindisaha Belt iyo Road. Dadaalka ay qaadatay sanadkii 2013, Shiinaha wuxuu bilaabay qorshaha "Belt" iyo wadooyinka kaas oo daboolaya 1 bilyan oo qof iyo 3 dal oo qiimihiisu yahay 65 tiriliyan US dollars. Mashruucan ayaa mahad leh, badeecada waxaa loo dhoofin karaa Shiinaha, Aasiya, Yurub iyo Wadamada Afrika iyadoo kharash badan lagu bixin karo tareenka, wadada iyo bada.
Marka la eego baaxadda waxqabadka Belt iyo Road, waxaa lagama maarmaan ah in lala wadaago xogaha qaar ee ay daabacday Shiinaha. Muddada illaa Julaay 2019 marka la barbar dhigo isla xilligii sanadkii hore waxay ahayd Shiinaha; Waxay kordhisay mugga ganacsiga ee ay la leedahay Imaaraatka Carabta 16.1%, 11.3% wadamada ASEAN, 10.8% wadamada yurub, 9.8% Ruushka iyo 3% wadamada Africa. Xaaladda guud, masiirka xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha iyo horumarada ku saabsan Belt iyo Initiative Road ayaa sidoo kale noqon kara mid wax ku ool ah u kuurgalista isbeddelada guud ee qaab dhismeedka sahayda adduunka.
HESHIISYADA XIRIIRKA JOOJINKA KA SAMEEYA 91% HADDII LACAG LA'AAN CADDAYO
Sida lagu sheegay daraasad ay sameysay Ururka Ganacsiga Adduunka; Haddii dhammaan qodobbada uu dhigayo Heshiiska Fududeynta Ganacsiga la dhaqan geliyo, waxaa lagu qiyaasayaa in celceliska waqtiga soo dejinta adduunka uu hoos u dhici doono 47%, taasoo ah kalabar badh, waqtiga dhoofintana 91%. Ka sokow horumarintan marka loo eego mudada, dabcan, heshiiska fududeynta ganacsiga ayaa 14.3% ka raqiisan ganacsiga. Cabbirka kobaca ganacsiga adduunka ee 1 tiriliyan doolarka Mareykanka sanadkii ayaa sidoo kale kamid ah qiyaasaha. Dabcan, inkasta oo qodobada Heshiiska Fududeynta Ganacsiga guud ahaan loo jiheeyo dhaqaajinta badeecada, dhammaan qeybaha logistikada caalamiga waxay ku jiraan bartamaha tallaabo kasta oo la qaadayo si loo fududeeyo ganacsiga. Wadamadu waxay xakameyn karaan dhaqdhaqaaqa alaabada iyagoo xakameynaya iridaha kastamka, sidoo kale waxay ku xakameyn karaan waaxda saadka iyadoo lagu dhiirigelinaayo, qawaaniinta, xeerarka shuruudaha tartanka ay u keenayaan waaxda saadka. Xaaladda guud, guusha caalamiga ee Heshiiska Fududeynta Ganacsiga ayaa inta badan saldhig u ah dhismaha saxda ah iyo hirgelinta xeerarka qeexaya qaybta saadka, taas oo ganacsiga gaarka loo leeyahay uu yahay mid firfircoon, taas oo ah, saadka ayaa sidoo kale ka ciyaara doorka taageera oo awood u siinaya dhaqdhaqaaqa xorta ah iyo deg degga ah ee alaabada.
SOURCE OF 14% ee qaybta taraafikada Gaadiidka xamuulka ah ee loo yaqaan 'GAS Oscillations'
Maaddaama qaybta gaadiidku ay tahay isha ay ka hesho 14% gaasaska hawada lagu koriyo ee adduunka, daraasadaha waxaa fuliya labada dowladood iyo hayadaha sarsare si loo baabi'iyo tabashooyinkaas. Tusaale ahaan, bishii Sebtember, Jarmalka ayaa ku dhawaaqay Qorshe hawleed Cimilada 2030. Sida qorshuhu yahay, wasakhda qiiqa ka soo baxa gaadiidka iyo waaxaha dhismaha ayaa lagu sarreyn doonaa, shirkaduhuna waxay ku bixin doonaan dowladda sicirka uumi baxa hawada. Intaa waxaa sii dheer, codsigii loo yaqaan IMO 2020 ee kujira qaab dhismeedka masuuliyada-deegaanka ee masuuliyadaha waaxda badaha ayaa dhaqan galay 1 Janaayo. Si kastaba ha noqotee, xadka 0.5% ayaa loo dejiyay maadada baaruudka ah ee shidaalka ay isticmaalaan maraakiibta.
KU SAABSAN SHAQAALAHA UGU DANBEEYA EE SHAQADA DADWEYNAHA IYO XIRIIRKA Isgaarsiinta
In kasta oo hoos u dhac ku yimid miisaaniyadda maalgashiga dadweynaha ee 2019 marka la barbar dhigo 2018, maalgashiga dadweynaha ayaa inta badan lagu maal galiyay waaxda gaadiidka iyo isgaarsiinta. Dhanka kale, wadaagga wada-xiriirka waa 152 milyan oo TL ah. Miisaaniyadda loo qoondeeyay gaadiidku waa 20.1 bilyan TL. Waxaa loo qorsheeyay in lagu isticmaalo 7.5 bilyan lira tareenka, 6.7 bilyan lira highway, 4.3 bilyan gaadiidka magaalada, 1 bilyan oo diyaaradeed.
SIXE SIYAASADAHA FARSAMADA
In alla inta uu jecel yahay qeybta saadka, dhab ahaantii waa arin adag in la cabbiro. Maaddaama kala-soocidda qaybta Gaadiidka iyo Kaydinta ay ka mid tahay waxqabadka rakaabka rakaabku, kuma filna in la soo bandhigo cabirka qaybta logistics-ka ee la xiriira rarka tooska ah. Sababtaas awgeed, waxay inta badan salka ku haysaa fikradaha xagga qiimeynta ee ku saabsan warshadaha saadka. Habka loo aqbalay waaxda iyo akadeemiyada ayaa ah in waaxda saadka ay saami ku leedahay 12 boqolkiiba GDP. Waxaa la aqbali karaa in boqolkiiba 50 cabirkan uu sabab u yahay wax qabadka shirkadaha bixiya adeegyada saadka tooska ah halka 50 boqolkiiba kale ay ka dhaceyso howlaha saadka ee ay fulinayaan shirkadaha ka ganacsada alaabada. Xaaladda guud, GDP ee 2018 waxay ahayd 3 tiriliyan 700 bilyan 989 milyan TL. Sanadka 2018, cabirka qeybta lojistikada waa la aqbalay 444 bilyan oo TL. Xogta GDP ee 2019 wali lama shaacin, laakiin waxaan haynaa qiyaas aan ku aqbali karno tilmaam ahaan. Sida ku xusan Barnaamijka Dhaqaalaha cusub ee la daabacay dayrta, GDP sanadka 2019 waxaa lagu qiyaasaa 4 tiriliyan 269 bilyan TL. Macnaha guud, waxaa la dhihi karaa in cabirka qeybta logistics uu ka sarreeyay 2019 bilyan TL sanadka 500.
IYADOO UU KA DHACDAY SHACABKA UGU DAMBANYAHAY
Gaadiidka badda ayaa leh qaybta ugu weyn ee soo dejinta iyo dhoofinta iyadoo lagu saleynayo qiime ahaan. Muddadii u dhexeysey 2009 illaa saddex-da saddexaad ee sannadka 2019, badaha waxay ku leeyihiin saami dhan 65-70 boqolkiiba gaadiidka soo dejinta. Isla muddadaas, saamiga waddada ayaa hoos u dhac ku yimid alaabada la soo dejiyo, halka ku dhawaad ​​20 boqolkiiba xamuulkii la soo dejiyey lagu qaado waddada. Gaadiidka diyaaradaha, dhanka kale, waxay kordhisay saamiga ay ku leedahay soo dejinta dhoofinta ilaa iyo 2009. Qaybta wadooyinka tareenka laga dhoofiyo ayaa ka yar 2012 boqolkiiba tan iyo sanadkii 1. Saamiyada shixnadaha xamuulka ee laga qaado badeecadaha la dhoofiyo ayaa kor u kacay tan iyo 2009 saamiga, oo ahaa 2009 boqolkiiba 47,05, wuxuu noqday 2019 boqolkiiba dhammaadka rubuc-saddexaad ee sannadka 62,42. Ka soo horjeedda saamiga kordhay ee dhoofinta badaha ayaa lagu arkay xamuulka dhoofinta ee uu wado, iyo saamiga wadada, oo ahaa 2009 boqolkiiba guud ahaan dhoofinta dhoofinta sanadkii 42,30, wuxuu ahaa 2018 boqolkiiba sanadka 28 iyo 2019 boqolkiiba dhamaadka rubaca saddexaad ee sanadka 28,59. In kasta oo aysan suurtagal ahayn in la go'aamiyo isbeddel kasta oo ku saabsan saamiga shirkadda diyaaradaha ee dhoofinta dhoofinta muddada la falanqeeyay, saamigeeda wuxuu ku kala duwan yahay 2011 boqolkiiba, heerka ugu hooseeya 6,42, iyo 2012 boqolkiiba, heerka ugu sarreeya sannadka 14,40 sannadka soo socda. Waxaa la arkay in qaybta tareenka ee dhoofinta dhoofintu ay leedahay saamiga ugu hooseeya isla markaana saamiga dhoofinta dhoofinta sannadaha oo dhan ay ka yaraayeen 0,93 boqolkiiba, oo ay kujirto 2011, oo ahayd qaybta ugu sarreysay muddadii la baarayay.
SHAQAALAHA UGU DAMBEEYA EE BADBAADADA BADBAADADA EE BADAN
Qaar ka mid ah isbeddelada muuqda ee sanadihii la soo dhaafay ku saleysan culeyska rarka lagu qaado alaabada laga dhoofiyo iyo dhoofinta ayaa sidoo kale soo baxaya. Qeybta badda ee dhoofinta culeyska ayaa leh 2018 boqolkiiba dhamaadka sanadka 78,25 heerkaan wuxuu noqday 2019 boqolkiiba dhamaadka rubuc seddexaad ee sanadka 80,15. In kasta oo loo arkay in saamiga badda ee dhoofinta dusha looga dhoofiyo iyada oo lagu saleynayo culeys uu sare u kacay tan iyo bilowgii xilliga la baaray, ka soo horjeedda isbeddelkan ayaa lagu arkay dhoofinta waddooyinka. Gaadiidka dhoofinta wadooyinka oo ku saleysan culeys, oo ahaa 2009 boqolkiiba sanadkii 25,24, ayaa muujinaya hoos u dhac saami ah ilaa sanadkii 2015: In kasta oo saamiga dhoofinta dhoofinta wadooyinka ee ku saleysan culeysku uu ahaa 2018 boqolkiiba dhamaadka 20,44, heerkaan wuxuu ahaa 2019 boqolkiiba dhamaadka rubuc seddexaad ee sanadka 18,54. Dhoofinta dhoofinta tareenadu waxay sii wadaa inay hesho qaybta ugu yar iyadoo loo eegayo culeyska sidoo kale salka ku haya qiimaha. Qaybta gaadiidka tareenka, oo ahaa 2009 boqolkiiba dhoofinta sanadkii 1,15, waxay ka yaraayeen 1 boqolkiiba dhammaan sanadihii dambe, dhoofinta.
DIIWAAN GELIN KU SAABSAN SHAQAALAHA KILOGRAMMIC EE QIIMAHA AY KU SAABSAN AIRLINE
Warbixinta ayaa sidoo kale ku jirtay xog ku saabsan celceliska qiimaha xamuulka qaada nooc kasta oo gaadiid ah. Waxaa la tilmaamay in qiimaha 1 kiiloogaraam oo xamuul ah oo laga soo dejiyo diyaaradda uu gaaray 2019 USD dhammaadka saddex-da saddexaad ee sannadka 3. Qiimaha la midka ah ee sanadkii 258.49 wuxuu ahaa $ 2015. Qiimaha culeyska culeyska laga dhoofiyo diyaaradda 153.76 sano gudahood wuxuu sare u kacay qiyaastii 5 boqolkiiba. Saddexdii bilood ee saddexaad ee sannadka 68, xamuulka dhoofinta hawada ayaa 2019 boqolkiiba ka qiimo badan xamuulka dhoofinta, kaas oo celcelis ahaan qiimahiisu yahay 11,51 USD halkii kiilo. Dabcan, inkasta oo aysan u naxdin lahayn sida diyaaradda, xaalad la mid ah ayaa ansax u ah wadada weyn. Celcelis ahaan, 22,5 kiilogaraam oo xamuul ah oo aan soo dejinno ayaa had iyo jeer ka qaalisan badeecadaha aan dhoofinno. Xaaladdaani waxay muujineysaa barta ay tahay in waaxda warshadaha gudaha iyo waxsoosaarku soo saaraan.
FASALKA LUUQADAHA FARSAMADA ILEEX WAA LAHAYN
Tilmaamayaasha lagu daabacay adduunka oo dhan ee UTIKAD Logistics Sector Report 2019 ayaa sidoo kale lagu daray. Tilmaanta Waxqabadka Saadka; wuxuu baaraa waxqabadka saadka ee waddamada ku yaal lix shuruudood. Kuwaas waxaa ka mid ah kastamyada, kaabayaasha, dhoofinta caalamiga ah, tayada adeegyada saadka, dabagalka iyo raadinta maraakiibta, iyo ugu dambeyntii maraakiibta waqtiga loogu talagalay. In 2018, Turkey kaalinta 160 ka mid ah 47 dal. Marka la barbar dhigo sanadihii hore, waxay soo bandhigtay tii ugu xumaa abid 2018. horumarka Turkey ayaa marka la barbar dhigo 2016. Ma jiro mid ku lixda qodob ee aan la ogaan karaa in xitaa la kulmeen hoos u dhac weyn.
Fududee of Sameynta Business Index, Turkey ee 2017, 60 ayaa bogaadiyo aad u wanaagsan oo ay si wadajir ah helitaanka la meydadka dowladda ka walaacsan in ay shaqada iyo Turkey ayaa abuuray qorshe tallaabo inay ka soo saarto amarka sare. Iyadoo dib u habaynta qaaday dalka Turkiga ee 2018, 43 codsiyada, iyo 2019 ayaa u dhaqaaqday 33. warbixinta ee warshadaha ee logistics "ka ganacsiga xuduudaha" topic dalka Turkiga waa # 44. Macnaha halkan, tallaabooyinka in la qaado si ay u kordhiyaan dhoofinta Turkey ayaa weli suurtagal tahay in la yiraahdo ma jiro jihada cad ee horumarinta.
Sannad kasta, diyaarshay oo daabacay Global World Economic Forum ee tartan Index, Turkey jabshay ee 2018 iyo 2019 ee 61. Sida ku cad warbixinta, Turkey ee isticmaalka macluumaadka iyo teknoolajiyada isgaadhsiinta iyo kaabayaasha iyo suuqa shaqada ayaa horumar duurka ku sameeyey. Isla mar ahaantaana warbixinta waxaa lagu xusay Turkey ayaa horumar ka yar gaadiidka hawada ka dhigay degaanka ee kaabayaasha iyo gaadiidka wadada horyaal laakiin sicir bararka sare sabab u ah xasiloonida Dhaqale-dhaqaale ee degaanka iyo sabab u tahay Ganacsi iyo caqabadaha aan canshuuraha in da'aan degaanka ee suuqa.
Dhoofinta dhoofinta tareenka
Tilmaanta Tartanka Caalamiga ah
dhoofinta dhoofinta wadada
Baaskiilka iyo Wadada Wadada
Warbixinta Qaybta Saadka ee UTİKAD